Adeegyada Dhexdhexaadinta ee Minnesota | Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
Adeegyada dhexdhexaadinta ee Minnesota
Marka arrimuhu aad u adkaadaan in wax laga qabto, dhexdhexaadintu waxay jirtaa in lagu caawiyo. The ururada xubnaha Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota waa deegaankaaga, khabiiro lagu kalsoon yahay si ay u bixiyaan si qarsoodi ah, xal ficil-ujeeda oo lagu heshiiyo dhammaan noocyada, noocyada, iyo muhiimada. Baro habka iyo kartida dhexdhexaadinta adoo isticmaalaya macluumaadka hoose. Qaado sahankayaga si aad u go'aamiso haddii dhexdhexaadintu kugu habboon tahay, oo nala soo xiriir wixii su'aalo ah. Waxaan u heelannahay GOBOLEEDKA OO dhan si aan kuugu adeegno oo aan u xalino khilaafaadkaaga.
Dhexdhexaadintu ma kugu habboon tahay? Ogow >
Habka Dhexdhexaadinta ee Minnesota
Dhexdhexaadintu waa dood sir ah oo ku tiirsan hannaan la xaqiijiyay oo lagu ogaanayo arrimaha, xal u helida, iyo in lagu heshiiyo waddo la wadaago. Iyadoo aan loo eegin in qofku si shaqsi ah uga qaybqaadanayo ama uu marayo goobta cusub ee CMM ee khadka tooska ah, habka dhexdhexaadinta ayaa caadi ahaan ka mid noqon doona tillaabooyinka aasaasiga ah ee soo socda: (1) hordhac; (2) wadaagista aragtida; (3) soo saarista iyo aqoonsiga danta; (4) Xalka maskaxeed; iyo, marka ay habboon tahay, (5) qorista heshiiska.
Iyadoo sharaxaad faahfaahsan oo tillaabo kasta lagu daray hoos, qaabka gaarka ah ee lamaanahaaga CMM ee aad dooratay ama laguu xilsaaray ayaa dib loo eegi doonaa inta lagu jiro habka qaadashada dhexdhexaadinta shakhsi ahaaneed. Si loo hubiyo raaxadaada iyo kalsoonidaada, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad waydiiso su'aalo wakhti kasta inta lagu jiro habka qaadashada iyo dhexdhexaadinta.
Dhexdhexaadiyahaaga sida khibradda leh loo tababaray ama kooxda dhexdhexaadiyeyaasha ayaa adiga iyo ka qaybgalayaasha kale ku soo dhaweyn doona dhexdhexaadinta. Waxay hagi doonaan filashooyinka fadhiga iyagoo sharaxaya ujeedada, habka, doorka dhexdhexaadiyaha, iyo natiijooyinka suurtogalka ah ee fadhigaaga. Ugu dambeyntii, waxay kuu faahfaahin doonaan xeerar gaar ah oo gaar ah ama waxay kaa caawinayaan fududeynta horumarinta hab-raacyadaada oo ku saleysan xiriirkaaga gaarka ah iyo waxaad doorbidayso.
Hordhac ka dib, dhexdhexaadiyaha ayaa adiga iyo ka qaybgalayaasha kale ku martiqaadi doona inaad wadaagtaan taariikh kooban oo ku saabsan khilaafka. Tani waa fursadaada inaad la wadaagto tafaasiisha muhiimka ah ee waayo-aragnimadaada si ay uga faa'iidaystaan ​​dhexdhexaadiyaha kaliya maaha, laakiin sidoo kale kuwa kale ee xaadirka ah, kuwaas oo aan inta badan si fiican u aqoonin ama aan qadarin aragtidaada. Sidoo kale, kuwa kale waxay heli doonaan fursad ay ku wadaagaan waayo-aragnimadooda, taas oo kuu oggolaanaysa inaad maqashid aragtidooda oo aad aqoonsato waxyaabaha ay isaga mid yihiin iyo faraqa u dhexeeya walaacyadaada.
Arrinka & Aqoonsiga Xiisaha
Dhexdhexaadiyuhu wuxuu markaas u wareejin doonaa wadahadalka si uu u dhiso liis shakhsi iyo mid la wadaago iyo danaha. Arrimuhu waa ficilladaas ujeeddada leh, dhaqamada la arki karo, ama wax kala beddelashada la cabbiri karo ee aad jeclaan lahayd in ay dhacaan dhexdhexaadinta ka dib. Xiisuhu waa dhiirigelinta hoose iyo baahiyaha gaarka ah ee qoto dheer ee aad rabto inaad ku qanciso khibradda dhexdhexaadinta iyo natiijooyinkeeda. Liiskani waxa uu noqon karaa mid fudud oo diyaar ah oo la xalin karo, faahfaahsan oo adag, ama meel u dhaxaysa. Iyadoo aan loo eegin isku dhafka, dhexdhexaadiyahaagu wuxuu kaa caawin doonaa inuu caddeeyo oo xaqiijiyo liiskan ilaa dhammaan ka qaybgalayaashu ay diyaar u yihiin inay bilaabaan raadinta xalalka suurtagalka ah.
Ka soo qaadashada liiskaaga la wadaago, dhexdhexaadiyaha ayaa kaa caawin doona fududaynta habka loo wada dhan yahay, ee waxtarka leh ee lagu ogaanayo xalalka suurtagalka ah. Adiga iyo ka qaybgalayaashaada waxa lagu dhiirigelinayaa inaad samaysaan hal-abuur inta lagu jiro tallaabadan; qiyaas tillaabooyinka kala duwan ee adiga iyo kuwa kale aad qaadi karto si aad wax uga qabato khilaafkaaga. Marka la qabto, dhexdhexaadiyaha ayaa markaa kaa caawin doona in liiskan lagu sifeeyo suurtogalnimada iyo dookhyadaada la wadaago.
Ugu dambayntii, xaaladahaas oo heshiis rasmi ahi ku habboon yahay lana codsado, dhexdhexaadiyuhu wuxuu gacan ka geysan doonaa diyaarinta liis cad oo la filayo ama wax-isweydaarsi ah oo dhacaya dhexdhexaadinta ka dib. Heshiiskani waxa uu noqon doonaa mid fudud ama tafatiran sida la codsado, loo baahdo, ama haddii kale waxa uu noqon doonaa mid waxtar u leh hirgelintiisa soo socota. Nuqullada heshiisyadan ayaa laga yaabaa in lala wadaago adiga iyo ka qaybgalayaasha kale, lagu hayo faylka bixiyahaaga dhexdhexaadinta, iyo/ama laga xareeyo cid kasta oo loo baahdo, sida maxkamad tixraac ah.
Maxaad u baadhaysaa dhexdhexaadinta?
Waxaad ka filan kartaa faa'iidooyin kala duwan ka qaybqaadashada dhexdhexaadinta. Qaar badan oo kuwan ka mid ah ayaa gaar u ah ama haddii kale ay adag tahay in la gaaro meel ka baxsan khibradda dhexdhexaadinta. Faa'iidooyinka xusidda mudan waxaa ka mid ah:
La awoodi karo. Iskaashi aan faa'iido doon ahayn, khidmadaha dhexdhexaadinta waa kuwo la awoodi karo waxayna ku saleysan yihiin baahiyahaaga iyo awoodahaaga gaarka ah. Xaaladaha qaarkood, tani waxay xitaa keeni kartaa adeegyo dhexdhexaadin oo bilaash ah adiga ama dhammaan dadka ku lugta leh.
Confidential. Ma xiisayso inaad hawada ku shubto dharka wasakhaysan. Annaguna ma nihin. Wadahadalada iyo go'aamada lagu gaadhay dhexdhexaadintu waa kuwo gaar ah sidaad doorbidayso. Iyo haddii wax siid ah loo baahdo, dhexdhexaadiyaha ayaa si fiican u sharxi doona shuruudahan oo u habayn doona khibradaada si waafaqsan.
Faa'iido leh. Waxa aanu ballan ku dhignay dhexdhexaadintaada wakhti iyo goob kugu habboon. Dhexdhexaadintu waxay ka dhacdaa xafiis maxalli ah ama online iyadoo lagu salaynayo goobtaada. Marmarka qaarkood, dhexdhexaadinta waxaa lagu ballansan karaa toddobaad ama laba toddobaad gudahood marka aad la xidhiidho.
Awood siinta. Khibradaada, danahaaga, xalkaaga, iyo codkaaga ayaa udub dhexaad u ah dhexdhexaadintaada. Inta uu hawsha socdo, dhexdhexaadiyayaashu waxa ay ka shaqeeyaan sidii ay u hubin lahaayeen in sheekadaada la wadaago si ay uga faa'iidaystaan ​​dhammaan ka qaybgalayaasha.
Fast. Dhexdhexaadin badan ayaa ku bilaabma kuna dhammaadaa hal kulan oo keliya. Iyadoo tani ay ku kala duwanaan karto baahidaada gaarka ah, dhexdhexaadintu had iyo jeer waa hab ka faa'iido badan marka loo eego ku tiirsanaanta maxkamadaha.
debecsan. Laga bilaabo xidhiidhkaaga koowaad, waxaanu ka shaqaynaa in aanu samayno waayo-aragnimo ka jawaabaysa baahiyahaaga gaarka ah. Inta lagu jiro dhexdhexaadintaada, waxaad wadaa habka oo aad go'aansato natiijooyinkeeda. Waxaanu arrimahaaga uga wada hadalnaa sida ugu fiican ee aad u baahan tahay, waxaananu diiwaangelinaynaa oo keliya waxa aad ogolaatay.
Gaaban. Qalbigeeda, dhexdhexaadintu waa wada hadal. Waxaad miiska soo saartaa waxaad rabto, waxaadna ka tagtaa waxaad u baahan tahay. Ma jiro buuq, ma jiro qaab aan loo baahnayn. Dhexdhexaadiyayaashaadu waxay bixiyaan qaab dhismeed wax soo saar leh waxayna kaa caawinayaan inaad sahamiso fursadahaaga, laakiin dhaqdhaqaaqa iyo niyadda adigaa iska leh inaad qeexdo.
Fiican. Dhexdhexaadinta, liisaska dalabaadka ee tartanku waa bilow. Dhexdhexaadiyeyaasha waxaa loo tababaray inay si qoto dheer u qodaan oo ay soo saaraan danaha qasabka ah ee dhiirigeliya dalabaadkaas. Waxay kugu dhiirigelinayaan adiga iyo kuwa kale inaad samaysaan natiijooyin wax ka qabta sheegashadaada iyo kicintooda.
Ka hortag. Marka la wadaagayo aragtidaada iyo maqalka kuwa kale, ka qaybgalayaashu waxay kobcinayaan qaddarin qoto dheer oo ku saabsan sababaha iyo cawaaqibka dhaqankooda iyo kuwa kaleba. Fahamkan, ka qaybgalayaashu waxay si wanaagsan ugu qalabaysan yihiin inay ka hortagaan khilaafyo kale. Waxaa ka sii muhiimsan, kaqeybgalayaashu waxay aqoonsan karaan ficillo gaar ah oo loogu talagalay in lagu yareeyo dhacdooyinka iyo xoojinta khilaafaadka mustaqbalka.
Waara. Heshiisyada dhexdhexaadinta ah waxay ka tarjumayaan ballanqaadyada dhabta ah ee ka qaybgalayaasha waxayna si joogto ah u keenaan dabagal la isku halayn karo. Weli, haddii aad u baahato fadhi dabagal ah si aad u hagaajisid heshiiska, uga wada hadashaan arrimo dheeraad ah, ama dib u xaqiijinta ballanqaadka midba midka kale, waxaan si farxad leh isugu soo laaban doonnaa sida ugu dhaqsaha badan oo habboon ee suurtogalka ah.
Iskaa wax u qabso. Dhexdhexaadinta adigaa iska leh si aad isugu daydo khilaafaadka doorashadaada. Marka laga reebo xulashada kiisaska ay maxkamaddu soo gudbiso, waxaad awoodaa inaad doorato in iyo goorta aad dhex-dhexaadiye la gelayso iyo in kale. Waad iman kartaa wakhti kasta oo aad rabto, oo aad ka tagi kartaa isla sidaas oo kale. Joogitaankaaga oo dhan waxa ay ka tarjumaysaa rabitaan heshiis, ee maaha dalabyada mid kale.
Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota hadda waxay leedahay awood ay ku xidho reer Minnesota iyo dhexdhexaadiyeyaal xirfad leh iyagoo jooga gurigooda! Isticmaalka adeegyada khadka ah, ururada wada-hawlgalayaasha CMM waxay jadwal u samayn karaan oo bilaabi karaan dhexdhexaadin ka qaybgalayaasha meelo kala duwan. Si aad u sahamiso doorashadan, fadlan nala soo xidhiidh si aan u go'aamino u-qalmitaanka.
Baro wax badan oo ku saabsan dhexdhexaadinta fog
Dhexdhexaadintu waxay diyaar u tahay khilaafyo kala duwan. Haddii khilaafkaagu uu ka taagan yahay miiska miiska ama miiska, u dhexeeya saaxiib ama qoyska, uu keeno niyad-jab ama cadho, ama uu dalbado wax kala beddelasho ama beddelaad, dhexdhexaadintu way ku caawin kartaa. Hoos waxaa ku yaal liiska meelaha caanka ah ee dhexdhexaadiyeyaashayada khubarada ahi ay inta badan wax ka qabtaan.
Community. Bulshadeenu waxay bilaabataa albaabka xiga waxayna u fidaysaa si sii kordheysa. Xidhiidh kasta oo cusub, suurtogalnimada isku dhac, khilaaf iyo xiisad ayaa kordha. Markay tani dhacdo, dhexdhexaadiyeyaal bulsheed oo xirfad leh ayaa u jooga inay caawiyaan. Isku dhacyada bulshada ee soo noqnoqda waxaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan xayawaanka deriska, deyrar, buuq, ama baarkin.
Consumer. Run ahaantii, macmiilka maya mar walba sax. Midkoodna ganacsigu ma noqon doono, arrinkaas. Marka danaha macaamilka iyo ganacsigu isku dhacaan, dhexdhexaadiyeyaal tababaran ayaa halkaas jooga si ay u caawiyaan. Haddii khilaafku ku lug yeesho qandaraas, lacag, lacag dhigaal ah, soo celin, ama dib u eegis, dhexdhexaadiyeyaashu waxay ku caawiyaan inay ku dufan taayirrada ganacsiga wada sheekaysi la hagayo.
Maxkamadda. "Waan ku arki doonaa maxkamada!" Dhab ahaantii, waxaa laga yaabaa inaan ku aragno halkaas, sidoo kale…ama ugu yaraan wax yar ka dib. Maxkamadaha maxalliga ah ayaa si isa soo taraya u gudbinaya kiisaska la doortay shuraakada CMM iyagoo isku dayaya inay bixiyaan xalal degdeg ah, oo ka badan kuwa la habeeyey marka loo eego maxkamaduhu awoodaan inay bixiyaan. Waxaan hadda ka caawinnaa maxkamadaha inay xalliyaan dacwooyin yaryar oo badan iyo kiisas qoyska ku wajahan.
Qoyska. Laga soo bilaabo xafiiltanka walaalaha ilaa kala tagga, waalidnimada la wadaago ilaa daryeelka waayeelka, dhexdhexaadiyeyaal qoys oo si gaar ah u tababaran ayaa diyaar u ah inay qoyskaaga ka caawiyaan diyaarinta koorsada isku dhaca iyo isbeddelka. Dhexdhexaadiyayaasheenu waxay ku hawlan yihiin qalbi iyo qaddarin qoto dheer oo ku saabsan gooni-u-yeelka qoys kasta iyo dhaqdhaqaaqiisa.
Housing. Gurigu waa halka qalbigaagu joogo. Marka gurigaas la handado, sidoo kale qalbigaagu waa sidaas oo kale. Hanjabaadahani waxay horseedaan iskahorimaadyo xoog leh, oo degdeg ah oo sii kordhaya kuwaas oo dhexdhexaadiyayaasheenna xirfadda leh ay si gaar ah ugu tababbaran yihiin inay soo dhexgalaan. Waxaan ka caawinaa ilaalinta raritaan, xasiloonida guriyeynta, iyo arimaha kireystaha-kireystaha ee caqabada ku ah wadnaha iyo guriga.
School. Wada-hawlgalayaasha CMM waxay bixiyaan waxbarasho, adeegyo, iyo tababaro waxbarasho oo ku wajahan barbaarinta ku jihaysan barbaarinta iyo xallinta khilaafaadka dugsiyada Minnesota. Waxay ka shaqeeyaan sidii ay u joojin lahaayeen cagajuglaynta, xamaasadda marinka xayndaabka, ku qalabaynta ardayda xirfado wax dhisaya, oo ay bixiyaan dad lagu daydo oo ku dhiirigaliya ardayda si ay u sii kordhiyaan awoodooda soo bandhigid.
Goobta. Iska horimaadyada cubicle, wararka xanta qaboojiyaha, takoorka, cagajuglaynta, kacdoonka, joojinta. Goobaha shaqada ee maanta waa goob miinada kicinta iyo dhibka. Mahadsanid, dhexdhexaadiyeyaasha goobta shaqada ee gobolka oo dhan waxay diyaar u yihiin inay furaan albaabada iyo maskaxda labadaba. Waxaan fududeynaa shaqada iskaashiga waxaanan si wax ku ool ah u hagaajineynaa xiriirka goobta shaqada.
Iimaan & Qoyska. Lamaane aan is qabin waxay lahaayeen wiil laba jir ah. Xiriirkoodu wuxuu ahaa mid aad u gaaban waxayna ku wada xiriiri jireen saaxiibo oo keliya. Aabuhu wuxuu rabay in wiilkiisa lagu soo koriyo iimaankiisa. Hooyadii ayaa dib u guursanaysay oo waxay rajaynaysay ilmo kale. Dhexdhexaadiyayaashu waxay diiradda saareen hooyada iyo aabbaha waxa u wanaagsan wiilkooda ee ma saarin xidhiidhkoodii hore. Labada waalidba way ku farxeen guushooda, heshiiska, iyo habka dhexdhexaadinta.
Niyad jabka deyrka. Laba qof oo deris ah ayaa boolisku u gudbiyay dhexdhexaadin. Mid kastaa waxa uu saacado qaatay in uu magaalada, booliiska, qareennada iyo qoysaskooda ka qayb-qaato muranka deyrka. Midkoodna ma arki karin wax kale oo aan ahayn in maxkamad la tago oo garsooruhu ha go'aamiyo. In kasta oo markii horeba ay ka caga jiidayeen in la isku dayo dhexdhexaadin, haddana labadooduba way oggolaadeen. Kalfadhigu waxa uu noqday mid qiiro leh markii laga hadlay sababta salka u ah khilaafka – arrin aan shaqo ku lahayn oodda. Taa beddelkeeda, mid kastaa si kale ayuu u fasiray dhacdo yar. Labaduba wakhtigaas waxay dareemeen ixtiraam darro wayna raali galiyeen. Waxaa lagu heshiiyey in arrinta guryaha laga tago oo laga shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa jawi xaafadeed oo wanaagsan.
"Ma ahayn inaan maalinta oo dhan ku qaadano sugitaanka in nalagu dhegeysto maxkamadda. Xal ayaanu u nimid oo duhurkii ka hor ayaannu guriga joognay!”
"Aad ayaan ugu faraxsanahay sida loo maareeyay dhexdhexaadinta. Xaqiiqdi waan kula soo xiriiri doonaa mar kale haddii ay dhibaato ka soo gaarto guriga.
"Qoyskayagu meelna kama helin isku day in aan nafteena go'aansanno halka aan aabaha dhigeyno ilaa dhexdhexaadinta. Mahadsanid."
" Dhexdhexaadinta waa in la bixiyaa waqti hore ka hor inta uusan khilaafku u qarxin dhibaato weyn."
La xidhiidh dhexdhexaadinta bulshada Minnesota
Safarka bogsashada wuxuu ka bilaabmaa halkan.
Ma u baahan tahay caawimaad colaad? Ma danaynaysaa dhexdhexaadinta, dhaqanka soo celinta, wadahadalka ama tababarka? Nala soo xidhiidh si toos ah adiga oo isticmaalaya macluumaadka hoose waxaanu kugu xidhi doonaa urur shuraako ah oo aaggaaga diyaar u ah inuu ku caawiyo.